ကျွန်တော်ကံမကောင်းဘူးတဲ့လား | နေရီ
Ko Than Oo said,
ကျွန်တော့်သားရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုသိရပြီးတဲ့နောက်မှာ သားတယောက်ထဲမှမဟုတ်ကျွန်တော်အပါအ၀င်အများစုဟာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့်သားအပေါ်ထားမိတဲ့စေတနာကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ့်အတွက်ရောအများအတွက်ပါရည်ရွယ်ရင်းရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ကိုသန်းဦးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ခံအားလည်းကောင်းလို့ဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိစေလိုပါတယ်။ တခုတ်တရမှတ်ချက်လေးရေးပို့တာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အစစအရာရာ
တစ်ခါတစ်လေ တစ်ထောင်ဖိုး ၀ိရိယ၊ ပညာ စိုက်ထုတ်ကြတာချင်း အတူတူ တခြားသူက တစ်သိန်းလောက် ရသွားပြီး၊ ကိုယ်က တစ်သောင်းဖိုးလောက်သာ ရသွားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ငါတော့ သူ့လောက် ကံမကောင်းဘူး ဆိုပြီး ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီကံဟာ အတိတ်ကံကိုပဲ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းတာလား ကံဆိုးတာလားဆိုတာကို သိဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားကတော့ ကမ္မ၀ိပါကော အစိန္တေယော လို့ ဟောခဲ့ပါတယ်။ ကံရဲ့အကျိုးပေးကို တွေးဆလို့ မရနိုင်ဘူးလို့ နားလည်မိပါတယ်။
ကျွန်တော့်အသိတစ်ယောက် အလုပ်တစ်ခုကို အသည်းအသန်ကို လိုချင်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအလုပ်က သူ့ကို မရွေးတဲ့အခါမှာ တော်တော်လေး စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထမအလုပ်ထက် လခကောင်း၊ ဖိအားနည်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို သူရသွားခဲ့ပါတယ်။ ပထမ အလုပ်ကို သူရခဲ့ရင် သူ့ကိုယ်သူ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မရတော့ သူက ကံဆိုးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ရသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ပထမအလုပ်ကို မရတာ့ဟာ ကံကောင်းတယ်လို့ ထင်ရပြန်ပါတယ်။ ပထမအလုပ်မရတာကိုပဲ ပထမ ကံဆိုးတယ်ထင်ရပြီး၊ နောက် ကံကောင်းတယ်ထင်ရပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ကံ အကျိုးပေးတစ်ခုဟာ ကံကောင်းတာလား ဆိုးတာလားဆိုတာကို တွေးဆလို့ မရဘူးလို့ ဟောခဲ့တာလို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် တွေးဆလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အတိတ်ကံအကြောင်းကို ခဏထားပြီိး ဆရာပြောသလိုပဲ အကောင်းဆုံးထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားကြရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဆရာ့ရဲ့စာတွေကို ဖတ်တဲ့အခါတိုင်း ပါဠိတော် အကိုးအကား အစုံအလင်နဲ့ ကိုယ်တွေ့လေးတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီိး ရေးသားထားတာ တော်တော်ပဲ ဖတ်လို့ကောင်းသလို၊ အားလည်း တတ်ရပါတယ်။ “အောင်” လည်း ခုလောက်ဆို ကံကောင်းနေ လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ (မရောက်တာကြာလို့ လာပြန်လည်ပြီး ဖတ်သွားပါတယ်။)
ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးလေးတွေက်ိုအချိန်ပေးဖတ်ပြီး တခုတ်တရစိတ်ဝင်တစားဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးလို့ဆရာ့ကိုကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဖြည့်စွက်ချက်လေးက ဆောင်းပါးဖတ်သူတွေအတွက် “ကံ” နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုမိုရှင်းလင်းသွားစေတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ၀ီရိယပါတဲ့ ဉာဏ်စုတ်ချက် ချယ်မှုန်းတတ်မှလည်း ကံ ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားဟာ လက်ရာ မြောက်လာမှာကို လူငယ်လူလတ်များ သိစေလိုတာပါ၊ “အောင်” လည်း ဖတ်ပြီးပြီပြောပါတယ်၊ အောင့်ရဲ့ ညီမလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သမီးအတွက် ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးလည်း မကြာခင် “တင်”ပါဦးမယ်။
အရမ်းကောင်းပြီး အားတက်စေတဲ. ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ဦးလေးရဲ. ပို.စ်တွေကို အမြဲတမ်းစောင်.ပြီး ဖတ်ပါတယ်။ပို.စ်တိုင်းနီးပါလည်း ကြိုက်ပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ဖို့ ၀ိဇ္ဖာနဲ့ပညာလိုတယ်လို့ အတိအလင်း မိန့်မှာပါတယ်၊ ပညာကတော့ တဏှာကိုပါယ်ဖို့ပေါ့၊ ၀ိဇ္ဖာဆိုတဲ့ အသိအမြင်တရားကို မှန်ကန်စွာ မြင်တတ်တဲ့ ကိုမင်းအတွက်လည်း ၀မ်းမြောက်နေမိတာအမှန်ပါ၊ နောင် ဆောင်းပါးတွေမှာ အမှားအမှန် မရေရာ မသေချာရင်လည်း အားမနာတမ်း မှတ်ချက် ပေးဖို့ ၀န်မလေးစေလိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။